Buy Universal Mobile Phone Adhesive Wall Mount Holder - Free Shipping & No Tax | WoopShop®
Universal မိုဘိုင်းဖုန်းကော် Wall Wall Holder
$8.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $11.99
Universal Mobile Phone Adhesive Wall Mount Holder - White backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
လိုက်ဖက်တဲ့အမှတ်တံဆိပ်: Apple iPhone, Samsung, Xiaomi
လိုက်ဖက်တဲ့: အတွက် iPhone 8 X7Plus Samsung Galaxy S9 S8 Plus Xiaomi တက်ဘလက်များအတွက်
Size: 12 *7* 2.5cm
ဖုန်းကိုင်သူသာမကဘဲချိတ်ထည်လည်းပါ ၀ င်သည်။
၎င်းကိုချောချောမွေ့မွေ့နှင့်နောက်ခံပုံများ၊ ထုံးနံရံများ၊ ကြွေပြားများ၊ သံမဏိများ၊ ဖန်သား၊ သစ်သားနှင့်သတ္တုမျက်နှာပြင်စသည်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
1 x Wall Mount ဖုန်းကိုင်ဆောင်သူ
Naprawdę dobra jakość. Zgodne z opisem. Już przyklejone. Jak dobry jest klej - okaże się z czasem (dla podglądu włożony stary telefon)
စျေးနှုန်းအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီးလျှင်မြန်စွာပေးရတာပါ။ ဒါနဲ့ကြယ်ငါးပွင့်ကိုငါပေးခဲ့တယ်။
Качествоотличное။ Держитсянастенекрепко။ Доставкабыстрая။
Всёсолидно! Качественноеисполнение! однозначнорекомендую! Полностьюсоответствуетописанию။